size doctor – MM Online Shopping
အမျိုးသားတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် ကြီးရှည်ကျင့်စက်
Material steel + silicone
Size doctor အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
လိင်တန်ကို ၃၀ရာခိုင်နူန်းနဲ့အထက်ရှည်လျားစေပြီး လုံးပတ်ကို ၂၀ရာခိုင်နူန်းတုတ်စေပါသည်။
ပိုကြီး၊ပိုသန်မာ ၊ပိုစွမ်းဆောင်နိုင်သော လိင်တန်ကိုရစေပါသည်။
ကိရိယာရဲ့အရှည်သည် ၈လက်မဖြစ်သည် (မိမိလိုချင်သည်အရှည်ရောက်အောင် ကိရိယာကို ရှည်အောင် လုပ်လို့ရပါသည်)
Size doctor နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
(၁) ဘယ်အချိန်လောက်ဆို စသိသာနိုင်ပါသလဲ????
များသောအားဖြင့် အသုံးပြုပြီးတပတ်ကျော်လောက်ဆို ထောင်မတ်ဖို့ပိုလွှယ်လာတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မည်၂ပတ်ကျော် ၃ပတ်ကျော်လောက်ဆိုရင် သိသိသာသာပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မည် တဦးခြင်းစီရဲ့ လက်ရှိအနေအထား အပေါ်မူတည်ပြီး ရလဒ်ကတော့မတူညီနိုင်ပါ။
(၂)ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်လို့ဆက်မသုံးမပြုတော့ရင် လိင်တန်က ပြန်ကျသွားပါသလား???
အညွှန်းစာအုပ်တအုပ်ပါရှိပါသည်။အသုံးပြုသူရဲ့ လက်ရှိအနေအထားအပေါ်မူတည်ပြီး တပ်ရမည့်အချိန်ပမာဏ ပါရှိပါသည်
၎င်းသည် လိင်တန် (traction) လို့လူသိများတဲ့ တင်းအားဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ဆဲလ်များကို ပိုင်းခြားပြီးများပြားစေပါသည်။ လိင်တန်ကိုဖွဲစည်းထားသော တစ်သှူးများရဲ့အရွှယ်အစားကို များပြားစေပြီး ကလာပ်စည်းအစိတ်အပိုင်းကို ကြီးထွားစေပါသည်။
(၅).အကယ်၍ ကျွန်တော်က ဒီကိရိယာရဲ့ အရွှယ်အစားထပ်ပိုပြီး ရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လို့လုပ်ရမလဲ ????
၎င်းတွင် ကိရိယာကိုပိုရှည်စေရန်အတွက် တိုးချဲလို့ရသည် တုတ်ချောင်းလေးများပါရှိပါသည်။ အညွှန်စာအုပ်တွင် တပ်ဆင်နည်းကို ထည့်ပေးထားပါသည်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
(၆).ရှည်တဲ့အတွက်ကတော့ အကိုပြောတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် ဒါပေမယ် လုံးပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးလို့ရ့ပါသလား????
၎င်းသည် အလိုအလျှောက် ကြီးလည်းကြီးစေပါတယ်ရှည်လည်းရှည်စေပါတယ် ဥပမာပေးရရင် ကြွက်သားသဘောမျိုးပါ ကြွက်သားများကြီးထွားလာပါက အရွှယ်အစားကော ပမာဏကောကြီးလာစေသလို့မျိုးပါ။
(၇).ကြီးထွားလာပြီးနောက် ထောင်မတ်နူန်းကကော အရင်အတိုင်းပဲလားခင်ျော ???
၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး လိင်တန်ကြီးထွားလာသောအခါ ၊ ထိုကိရိယာသည် လိင်တန်ရဲ့အကန့်တွေ့တွင်းသို့ သွေးစီးဆင်းမူပမာဏကိုပိုများစေပါသည် ၎င်းသွေးများသည် ထောင်ပတ်မူကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသွေးစီးဆင်းမူ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဆဲလ်များကိုအသစ်ဖြစ်တည်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုပြီး အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ ထောင်မတ်ခြင်းကိုလည်း ပိုသန်မာစေပါသည်။
လုံးဝမသိသာပါ၎င်းသည် သေးငယ်၊ပေါ့ပါးပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။၎င်းကိုသင့်ရဲ့ဘောင်းဘီအောက်တွင် ၀တ်ထားပါက ဘယ်သူကမှ သင့် လိင်တန်တွင် တခုခုတပ်ဆင်ထားသည်ကို မသိနိုင်ပါ။
Size doctor နှင့် Proextender ရဲ့ကွာဟချက်
Proextenderကတခုကို လေးသောင်းကျပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် size doctor ရဲ့ တ၀က်ဈေးပဲရှိပါသည်။ ဈေးနူန်းအားဖြင့်ဆိုပိုသက်သာပါသည်။
proextender က တပ်ရတာခက်ခဲတယ် SIZE DOCTOR က လွယ်ကူမယ်။
proextender က အချိန်ကြာကြာအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူးလိင်တံ ထိပ်ပိုင်း နာလာပါတယ် ။
SIZE DOCTOR က လိင်တံ ထိပ်ပိုင်းကို လေစုပ်ခွက်နဲ့ စုပ်ယူထားတာကြောင့်လုံးဝ မနာပါဘူး ။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးနဲ့ နည်းပညာ မြင့်မားတာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ နဲ့ ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လိင်တံ ကြီးထွားရှည်ထွက်လာဖို့ သေချာပါတယ် ။
box တွင်ပါဝင်သော ကိရိယာများ
Penis extender base:
Springs Fixing Bolts:
Girth fixing band:
Spring power index:
ယ်နေရာပို့ပို့ ပို့ခ ၂၀၀၀ ဖြင့် မြန်မာပြည်အနှံ အိမ်ရောက်မှာ ငွေချေစနစ်ပါခင်ဗျာ မှာယူပြီး ၁၀ရက်အကြာတွင် ပစ္စည်းရရှိပါလိမ့်မည်။
ဘဏ်ငွေကြိုလွှဲ၇န်လိုသော မြို့များ ။ အမြန်လိုသော customers များ( ဒီနေ့ ငွေဝင်တာနဲ့ နောက်နေ့ကားဂိတ်သို့ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးပါသည် )
သန့် ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် အခါအားလျှော်စွာ သတ်မှတ်ထားသော ပစည်းများမပါပါ။
Be the first to review “size doctor” Cancel reply
tension ring ( ထောင်မတ်မူအားကောင်းစေရန်နှင့်သုတ်ထွက်နူန်းကြာစေသောကွင်း)
Ks45,000.00 Add to cart
size master pro pump
Ks75,000.00 Add to cart